ဂျာမနီယဉ်ကျေးမှု | ခရီးသွားသတင်းများ
Mariela Carril | 21/09/2021 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 21/09/2021 19:11 | Alemania, ယဉျကြေးမှု
Alemania ဥရောပတိုက်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိပြီးရုရှားပြီးလျှင်နိုင်ငံဖြစ်သည် တိုက်ကြီးတွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သည်၎င်း၏ပြည်နယ် ၁၆ ခုတွင်လူ ၈၃ သန်းနေထိုင်သည်။ စစ်ပွဲအပြီးတွင်တိုင်းပြည်ကိုခွဲဝေမှုသည်ကြီးကျယ်သောဘုန်းအသရေဖြင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့သည်ကိုသံသယမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်သမိုင်း၏ Phoenix တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုဘယ်လိုလဲ? သူတို့သည်အလွန်စည်းစနစ်ကျပြီးစည်းကမ်းတင်းကျပ်သောလူမျိုးများဖြစ်သည်မှာမှန်သလော။ ဟာသကောင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သောနေရာရှိပါသလား။ Actualidad Viajes ရှိယနေ့ဆောင်းပါးသည်ဂျာမနီယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းဖြစ်သည်။
ဤနိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်းသည်ရှည်လျားပြီးအရေးကြီးဆုံးဥရောပပွဲများတွင်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့်အမြဲပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောသူများသည်ဂျာမနီ၏သမိုင်းကို ၀ င်ရောက်ကြသည် ၁၉၃၃ တွင်နာဇီအစိုးရ၎င်းကိုယူသောအစိုးရ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ဆိုးရွားသောအဖြစ်ဆိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် the မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်း။
စစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဂျာမန်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားနယ်မြေခွဲဝေမှုများပေါ်လာလိမ့်မည်။ အရင်းရှင်တစ်ပိုင်းနှင့်ကွန်မြူနစ်တစ်ပိုင်း ဆိုဗီယက်အုပ်ချုပ်မှုအောက် ဒါကြောင့်သူ့အသက်ဟာနှစ်ဆယ်ရာစုကုန်ခါနီးအထိကုန်သွားလိမ့်မယ်၊ ငါတို့အသက် ၄၀ ကျော်သူတွေငါတို့ကတီဗီမှာမြင်တယ်။ ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလဲ ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်သည်။
ယနေ့ဂျာမနီသည်တစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားကောင်းမွန်သောစကြဝmedicalာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်၊ အခမဲ့လူထုပညာရေးနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းတို့ဖြင့်စက်မှုနှင့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီမှာတစ်ခုရှိတယ် ဘာသာတရား၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကျယ်ပြန့်သည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော်လည်းဤကြွယ်ဝမှုနှင့်အတူဂျာမန်တို့၏အပြုအမူတွင်မှတ်သားနိုင်သောအချို့သောကိန်းသေများရှိသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသည်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမားများနေထိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကြီးမြတ်သောဘုံပိုင်းခြေတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အမှားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပြောဆိုနိုင်သည် ဂျာမန်များသည်ယုတ္တိရှိပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည် ထို့ကြောင့်လည်းထို့အတူပင် ၎င်းတို့သည်စနစ်တကျနှင့်စနစ်တကျရှိသည်။ ဤသဘောအရ၊ နာမည်တစ်ခုပေးနိုင်သောအဓိကကိန်းသေဖြစ်သည် puntuality ။
ဂျပန်တွေလိုပဲ၊ ဂျာမန်များသည်အချိန်တိကျသောလူမျိုးများဖြစ်သည် ၎င်းသည်အချိန်မီလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေသည်။ အများသုံးအဆောက်အ ဦး တွေမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒါမှမဟုတ်ဂရုစိုက်မှုအကြောင်းပြောနေတယ်။ အမိန့်တစ်ခုအားလိုက်နာပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုသေချာစေသည်။ ရထားတွေကဒီမှာနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူး၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ လေယာဉ်တွေကနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူး၊ နာရီတွေကအမြဲကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ အစီအစဉ်များကိုစာနှင့် လိုက်၍ "အချိန်တိကျခြင်းသည်ဘုရင်များ၏ကြင်နာမှု" ကဲ့သို့စာသားပါသောဆောင်ပုဒ်ကိုလိုက်နာသည်။
ထို့ကြောင့်သင်ဂျာမန်တစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမည်ဆိုလျှင်သင်အချိန်တိကျ။ သင်ချမှတ်ထားသောအချိန်ဇယားများကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းကပိုကောင်းသည်။ မပြောရသေးသည့်စည်းမျဉ်းတစ်ခုပင်ချိန်းချက်ချိန်မတိုင်မီငါးမိနစ်ကြိုရောက်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဂျာမန်များသည်အအေးမိခြင်းကြောင့်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည် မိသားစုနှင့်ရပ်ရွာ၏အယူအဆများသည်ကောင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသည်မရ။ ရပ်ရွာသည်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာသည်၊ ထို့ကြောင့်ရပ်ကွက်၊ မြို့တစ်မြို့၊ တစ်မြို့လုံးတွင်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းပြဿနာများမရှိချေ။ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကိုချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
La ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ၎င်းသည်စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားသောအရာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့မကြာသေးမီကအဓိပတိမာကယ်ကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးဝါဒီတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးခဏတိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားသည် LGTB နှင့်ယခုခဏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများ
သိသာထင်ရှားတဲ့အရာကလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူး၊ လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးတွေကိုမကြိုက်ပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်ကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုမကြိုက်တဲ့ဂျာမန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလက်ယာအုပ်စုတွေရှိတယ်။ အဲဒါကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့အဲဒါတွေအကြောင်းပြောရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလား။ အပြင်မှာလည်းမိုက်တယ်။ ဂျာမန်လူ ဦး ရေ၏ ၇၅% သည်မြို့ပြဖြစ်သည် ပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာလူတွေကပိုပြီးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးဒီကိစ္စတွေမှာပွင့်လင်းတယ်။
ယခုအချိန်၌ဂျာမနီသည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်လာသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလောင်စာအသစ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးချခြင်းကိုအားပေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
ပညာရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးစနစ်များထဲမှတစ်ခုရှိသည် ပြီးတော့အတိတ်ကနေလာပြီးပြေလျော့ချင်ပုံမပေါ်တဲ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်တစ်ခု။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှ ၃၅-၄၀ နာရီအလုပ်လုပ်သည် ၎င်းကိန်းဂဏန်းများသည်ဥရောပ၌အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမပျက်စေရမရ။ ၎င်းသည်အားလပ်ရက်ပိုယူသောမြို့များအနက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကနေရောင်ဘယ်လောက်ကြိုက်သလဲ၊ ဥပမာစပိန်ကမ်းခြေတွေကိုဘယ်လိုရှာကြတယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပါ။ သူတို့အတွက်နိုင်ငံပြင်ပခရီးကအရေးကြီးပါတယ် အချက်အလက်များအရဂျာမန်များသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးများပိုသွားကြောင်းညွှန်ပြသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ အခြားဥရောပသားများထက် သင်ဘယ်သွားမလို့လဲ? စပိန်၊ အီတလီ၊ riaစတြီးယားသို့ ...
အဆိုပါဘာတွေလဲ ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကေတများ ဒီနိုင်ငံကလား? ၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းအရခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းယနေ့မွတ်ဆလင် ဦး ရေများပြားသောကြောင့်လနှင့်အစ္စလာမ်ကြယ်တို့သည်ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှု၏သင်္ကေတအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံဆောင်သဏ္ာန်တူသူများအားလည်းအမည်တပ်နိုင်သည် Marx, Kant, Beethoven သို့မဟုတ် Goetheဥပမာသည်။
ပြီးတော့ကော ဂျာမန်အစားအစာယဉ်ကျေးမှု? ဒါကအစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအဓိကကျပါတယ် အသားe သည်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းနှင့်အတူတစ်နေ့တာ၏ထမင်းစားတိုင်းတွင်အမြဲလိုလိုပါ ၀ င်သည် ကျင်ခွက် နှင့် အာလူးအဆိုပါ ဝက်အူချောင်းအဆိုပါ ဒိန်ခဲအဆိုပါ ဆားစိမ်ရေမရ။ ညစာစားရန်အပြင်သွားခြင်းသည်လူကြိုက်များပြီးယနေ့အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏စားသောက်ဆိုင်များလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အစားအစာသည်အလွန်ကွဲပြားသည်။
ဂျာမန်လူမျိုးများ၊ ၎င်းကိုအလွန်ကြိုက်သည် ဘီယာ ဒါကြောင့်အပြင်မှာရောအိမ်ထဲမှာပါအရက်မူးနေတယ်။ ဘီယာရဲ့နောက်မှာဝိုင်၊ ဘရန်ဒီ ... ဒါပေမယ့်မင်းသိတဲ့အတိုင်းဘီယာကအကြွင်းမဲ့ဘုရင်မပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပိုပြောနိုင်တဲ့ဂျာမန်ရိုးရာတွေရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမအချက်ရှိတယ် ဘာသာရေးပွဲတော်များခရစ်ယာန်နှင့်ပရိုတက်စတင့် (သို့) ယခုအစ္စလမ်ဘာသာ (သို့) လူကြိုက်များသောပိုများသောလောကထုံးတမ်းစဉ်လာများလည်းဖြစ်သည် လက်ဖက်ရည်သောက်ချိန် အဖြစ်လူသိများ kaffee နှင့် kuchen.
ထိုအချိန်က ရိုးရာဝတ်စုံ မင်းနာမည်ကြီးဖို့နာမည်ပေးရမယ် ဦး ဆောင်သူBavarian (သို့) Tyrolean ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောနိုင်ငံသားများမှသုံးသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဖြစ်သည် dirndl၊ အလွန်ရောင်စုံအင်္ကျီနှင့်စကတ်ပါသောဝတ်စုံကိုကျေးလက်ဒေသတွင်ပင်မသုံးတော့ဘဲဘီယာပွဲတော်များသို့မဟုတ်အခြားရိုးရာပွဲများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါတွေကယေဘူယျအားဖြင့်သေချာတာပေါ့၊ သင်ဂျာမနီတစ်ဝှမ်းလုံးကိုခရီးသွားရင်၊ အပြောင်းအလဲတွေ၊ ပိုပွင့်လင်းတဲ့လူတွေ၊ ပိုပိတ်ထားတဲ့လူတွေ၊ လှပတဲ့တောင်ပေါ်ရွာတွေ၊ တောင်ဘက်၊ အနောက်တောင်နဲ့အနောက်ဘက်တွေမှာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့နာမည်ကြီးပွဲတော်တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ရာစုနှစ်များ (ဥပမာ၊ နှစ် ၃၀ စစ်ပွဲနှစ်ပတ်လည်ချီတက်ပွဲ)၊ ပုံမှန်အစားအစာများသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်နာမည်ကျော်မြို့ကြီးများတွင်ရောင်းချသောရောင်စုံစျေးကွက်များ ရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Alemania » ဂျာမနီယဉ်ကျေးမှု